Taolan-tehezana voahosotra miaraka amin'ny divay sy saosy thyme - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
Taolan-tehezana voahosotra miaraka amin'ny divay sy saosy thyme
Carnes45 minitraOlona 4440 kaloria
Ireo taolan-tehezana ireo miaraka amin'ny divay sy saosy thyme dia lovia mora, miaraka amin'ireo akora tsotra sy feno tsiro.
Ny taolan-tehezana mihitsy dia efa matsiro be fa raha ampiantsika ity saosy matsiro ny divay sy ny anao dia nohatsaraina ny tsirony. Aza adino ny manompo azy ireo amin'ny mofo kely hankafizany azy tanteraka.
Azonao atao koa ny manararaotra fandrahoan-tsakafo ambaratonga ary manomàna fomba fahandro hafa na ravaka legioma amin'ny varoma.
1 Taolan-tehezana voahosotra miaraka amin'ny divay sy saosy thyme
2 Te hahafantatra misimisy momba ireo taolan-tehezana fohy nandrahoana divay sy saosy thyme ireo ve ianao?
Tsy ho hainao ny manohitra ny saosy matsiro amin'ireo taolan-tehezana ireo.
Karaoty 70 g
Tongolo 150 g
Tongolo 1 tongolo gasy
Menaka oliva 15 g
Tombo-kazo 1 na iray sotro (habe volontany) an'ny thyme maina
Katsaka na ovy 10 g
Rano 20 g
Napetrakay tao anaty vera ilay karaoty voadio, madio sy voatetika. Manaikitra izany isika mandritra 5 segondra, hafainganam-pandeha 5. Niala izahay ary nitahiry.
Napetrakay ny tongolo lay sy ny tongolo, nopotsehinay ary notapahinay. Manaikitra azy ireo isika mandritra ny 5 segondra, hafainganam-pandeha 5.
Ampio ny menaka oliva ary endasina amin'ny 5 minitra, 120º, hafainganam-pandeha 1.
Ampio ny karaoty voatetika notehirizinay sy ny tenanao. Izahay dia manao fandaharana 5 minitra, 120º, hafainganam-pandeha 1.
Ampiarahinay ny taolan-tehezana, ny divay fotsy ary ny ron-kena. Izahay mahandro sakafo 30 minitra, 100º, hafainganan'ny sotro, fihodina ankavia.
Rehefa afaka ny fotoana dia esorinay ny taolan-tehezana sy ny sprite thyme. Torotoro izahay mandritra 1 minitra, hafainganana mandroso 5-7-10.
Atsonika na levonay ny starch ao anaty rano ary ampiantsika amin'ny saosy. Izahay mahandro sakafo 3 minitra, 100º, hafainganam-pandeha 1 tsy misy hano matevina ny saosy.
Afangaro amin'ny saosy ireo taolan-tehezana ary aroso izahay.
Te hahafantatra misimisy momba ireo taolan-tehezana fohy nandrahoana divay sy saosy thyme ireo ve ianao?
Ny taolan-tehezana dia tsy ny henan'ny hena izay tena ampiasaintsika ao an-trano fa rehefa manomana azy isika mankafy azy ireo foana izahay. Izy ireo dia masaka matsiro miaraka amina tsotra vitsivitsy ovy o miaraka amin'ny vary.
Fa tamin'ity indray mitoraka ity dia namboarinay izy ireo tamin'ny saosy manankarena iray ary miaraka amin'ny akora fototra toy ny thyme sy divay fotsy.
Ity fomba fahandro ity, na dia mila dingana vitsivitsy aza, dia tsotra ary azonao atao koa ny manararaotra ny dingana 5 ka manomàna ravaka legioma, vary na ovy hiaraka sy hanomana menio feno.
Azonao atao ihany koa manararaotra varoma ary manomàna resipeo hafa izay mila setroka 30 minitra toy ny mofomamy hena, ny trondro na ny sasany atody ao cocotte.
Ity fomba fahandro ity azonao atao foana ho an'ny 4 na 5 ao anaty vata fampangatsiahana raha mbola ao anaty kaontenera miakatra amin'ny rivotra izy ary ahitsy amin'ny volany.
Raha manana ampahany sisa ianao dia azonao atao izany congelar 3 volana farany ambony
Fanazavana fanampiny - Ovy notetehina niaraka tamin'ny taolan-kisoa / Vary misy taolan-tehezana / Pio hena miaraka amin'ny voanjo sy paprika / Tuna sy mofomamy asparagus fotsy / Atody amin'ny cocotte misy holatra, bacon ary gruyer
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Carnes, Tsotra, Latsaky ny adiny 1
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » General » Tsotra » Taolan-tehezana voahosotra miaraka amin'ny divay sy saosy thyme
Cake voatavo Halloween